Line Laser Module, Line Laser, Line Laser Mwenje Vagadziri uye Vatengesi muChina
Tsanangudzo:Mutsetse Laser Module,Mutsetse Laser,Mutsetse Laser Chiedza,Mutsetse Laser Module,,
 HomeProductsLaser ModuleMutsetse Laser Module
Mutsetse Laser Module (Total 9 Products)
Zvigadzirwa zve Mutsetse Laser Module , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Mutsetse Laser Module , Mutsetse Laser vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Mutsetse Laser Chiedza R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Iyi tsvuku laser module inosanganisira epurasitiki optic, laser diode uye mutyairi wedunhu. Kwakanakisa kuvhunduka kuramba uye kupisa kupisa. iri rakanakira rakasiyana-siyana rakaderera simba laser zvinoshandiswa, senge kunongedzera zvishandiso,...
Iyo tambo iyo 808nm infrared laser module yakaburitswa isingaonekwe. Iyi laser module inonyanyo shandiswa pane muchina chiratidzo, kuongorora, uye kunyatso kuenderana. Tsanangudzo: Wavelength: 808nm Simba Rinobuda: 40mw, 100mw, 200mw, 500mw Kukura...
Iyi tsvuku mutsara laser module inosanganisira girazi optic, laser diode uye mutyairi wedunhu. Kwakanakisa kuvhunduka kuramba uye kupisa kupisa. iri rakanakira rakasiyana-siyana rakaderera simba laser zvinoshandiswa, senge kunongedzera zvishandiso,...
Iyi yemhando yepamusoro Red Line Laser module yakanyatso kuzvidzora ine laser diode, yakasanganiswa laser mutyairi wedunhu uye girazi rinoona lens, ichigadzira iri nani mutsetse mhando uye nani simba kugadzikana. Mutsara mutsvuku laser module...
Iyi compact tsvuku mutsara laser module inongova 6 x 11.2 mm chete. Red Line Laser module yakanyatso kuzvidzora ine laser diode, plastiki optical lens. Mutyairi wedunhu ari kunze kwekasi.Tsanangudzo: Wavelength: 635nm, 650nm Simba Rinobuda: 1mw, 5mw...
Iyi yemhando yepamusoro Red Line Laser module yakanyatso kuzvidzora ine laser diode, yakasanganiswa laser mutyairi wedunhu uye girazi rinoona lens, inogadzira iri nani mutsara mhando uye nani simba kugadzikana. Girazi remaziso lens rinopa mutsetse...
Iyi yemhando yepamusoro Red Line Laser module yakanyatso kuzvidzora ine laser diode, yakasanganiswa laser mutyairi wedunhu uye girazi rinoona lens, inogadzira iri nani mutsara mhando uye nani simba kugadzikana. Uchishandisa 24V voltage. Mutsara...
Iyi yegirini mutsara laser module inosanganisira girazi optic, laser diode uye mutyairi wedunhu. 14 x 50 mm diki casing saizi haidi yakawanda nzvimbo. iri rakanakira rakasiyana-siyana rakaderera simba laser zvinoshandiswa, senge kunongedzera...
Iyi 650nm 5mw tsvuku laser module inosanganisira epurasitiki optic, laser diode uye mutyairi wedunhu. Kwakanakisa kuvhunduka kuramba uye kupisa kupisa. iri rakanakira rakasiyana-siyana rakaderera simba laser zvinoshandiswa, senge kunongedzera...
China Mutsetse Laser Module Vatengi
Changchun Realpoo inyanzvi inogadzira ma laser modules munyika. Yedu kambani ine e xperienced mainjiniya, Unyanzvi hwekugadzira mutsetse, wakanaka muchina wekuyedza pamwe neyemberi chimbo Nezvakanakira, isu tinopa laser module, laser diode, laser mwenje, laser danho mwenje, laser
peripheral chigadzirwa, pcb redunhu dhizaini uye kuvandudza uye zvichingodaro. Tinogona kuona yakakwira vanokwanisa mwero.
Mutsetse Laser Module Mutsetse Laser Mutsetse Laser Chiedza